प्रायलाई थाहा नहुने नाइटोबारेमा यी १० कुरा जसले तपाइँलाई ठूलो आश्चर्यमा पार्नसक्छ ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकप्रायलाई थाहा नहुने नाइटोबारेमा यी १० कुरा जसले तपाइँलाई ठूलो आश्चर्यमा पार्नसक्छ !
प्रायलाई थाहा नहुने नाइटोबारेमा यी १० कुरा जसले तपाइँलाई ठूलो आश्चर्यमा पार्नसक्छ !
एजेन्सी – नाभि अर्थात् (नाइटो), कुनै मानिसको अति आकर्षक, कसैको रौँले छोपीएको, कसैको बहिएर निस्किएको या यस्तै यस्तै विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन् । यो मानव शरीरको एकदमै दिलचस्प अर्थात् उत्सुकता हुने खालको भाग हो ।विश्वका धेरै वैज्ञानिकहरुको दिमागमा नाभिले धेरै प्रश्न उठाउने गरेको पाईन्छ । एक पुरुषले यौ-न स-म्पर्कका बेला आफ्नो पार्टनरको नाभिमा सुम्सुमाएर उ-त्ते-जित गराउने पनि गरेको पाईन्छ । साँच्चिकै यो हामीलाई एक उत्सुकता पैदा गर्ने खालको मानव शरीरको एक भाग हो ।
सायद तपाइँलाई नाइटोका बारेमा यस्ता आश्चर्यजनक र अनौठ कुरा थाहा छैन होला, आउनुहोस् त्यही नाभिमा पाईने अचम्म लाग्दा कुराहरु जानौं ।१) नाइटोमा ६७ प्रकारका जिवाणुहरु पाईन्छन् । यो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा गन्धयुक्त भाग हो ।२) संसारमा केबल ४ प्रतिशत मानिसहरुको नाइटो बाहिर निस्किएको हुन्छ । बाँकी सबैको नाइटो भित्र पसेको हुन्छ ।३) बाहिर निस्केको नाइटोलाई दोषपूर्ण नाइटो पनि भनिन्छ । नाइटो बाहिर निस्कनुको कारण जन्मिदा डाक्टरले राम्ररी नाइटो नबाँध्नु हो ।४) महिलाको तुलनामा पुरुषको नाइटोमा धेरै रौं हुन्छ ।
५) के तपाइँलाई थाहा छ ? विश्वको से-क्सी महिलामा नाइटो छैन । ६) नाइटो केबल स्तनधारीमा पाईन्छ । अन्डा दिने जनावरमो पाईदैंन ।७) नाइटो राम्रो हुनमा ९ महिना लाग्छ ।८) Tआकारको नाइटो सबैभन्दा बढि कामुक हुन्छ ।९ ) दुई ब्यक्तिको नाइटो समान हुन सक्दैन । किनकि हरेक ब्यक्तिको शरीरमा फरक फरक जिवाणु पाईन्छ ।१०) महिलाको नाइटो गोप्य हुन्छ । जुन महिलाको नाइटो बीचमा हुन्छ, त्यस महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्माउँछ।